Ukuphakelwa Kukagesi Ukuvikelwa - China BST (HongKong) Industrial
Bonisa Amandla Supply
Industrial Control Ukuphakelwa Kukagesi
Rainproof Amandla Supply
PFC Quad lokukhipha
PFC Single lokukhipha
PFC Kathathu lokukhipha
Amandla Ukuvikelwa Supply
450W lokukhipha Single Ukushintsha ama Amandla Supply IRS-450w
125W Quad lokukhipha Ukushintsha ama Amandla Supply ITQ-125W
75W lokukhipha Dual Ukushintsha ama Amandla Supply IRD-75W
50W lokukhipha Kathathu Ukushintsha ama Amandla Supply ITT-50W
Kunezinye izici eziningana ukuthi ukusebenza nomthelela amandla supply. Phakathi kwalezi kubalwa ukwenza labo abaqashwe ukuvikela ukuthengisela, abalwe ngezansi.
Overcurrent : A imodi ukwehluleka kubangelwa okukhipha umthwalo lamanje ukuthi mkhulu kunabo esithile. It is engavimba esiphezulu ikhono samanje amandla supply futhi ilawulwa Ukuvikelwa izifunda yangaphakathi. Ingase futhi ilimaze kwamandla kwezinye izimo. Izifunda iDemo phakathi okukhipha amandla ukunikezela phansi ungakha imisinga ngaphakathi ohlelweni ukuthi kunomkhawulo kuphela esiphezulu ikhono amanje nawesikhathi impedance sangaphakathi kwamandla. Ngaphandle nokukhawulela, lokhu zamanje okusezingeni eliphezulu kungabangela okweqile nokulimaza okuphakela amandla kanye umthwalo futhi interconnects yayo (iminonjana wesifunda ephrintiwe ibhodi, izintambo). Ngakho-ke, Izimpahla kakhulu amandla kufanele abe wamanje nokukhawulela (Ukuvikelwa overcurrent) enza uma wamanje okukhipha idlula esiphezulu ecacisiwe.
Overtemperature: A lokushisa okungukuthi ngaphezu kwalokho ayikho amandla supply sika oshiwo kumelwe kungavinjelwa noma kungabangela ukwehluleka amandla supply. Ngokweqile yokusebenza lokushisa kungalimaza kwamandla kanye izifunda ezixhunywe kulo. Ngakho-ke, Izimpahla eziningi zisebenzisa inzwa lokushisa nelezifunda ezihambisana ukukhubaza supply uma izinga lokushisa lokusebenza layo lidlula value othize. Ikakhulukazi, Semiconductors elisetshenziswa supply basengozini okushisa angaphezu komkhawulo wabo ecacisiwe. Izimpahla eziningi zihlanganisa ukuvikelwa overtemperature ukuthi sivale supply uma izinga lokushisa udlula umkhawulo ocacisiwe.
Overvoltage: Le modi ukwehluleka kwenzeka uma lo voltage okukhiphayo uya ngenhla ecacisiwe dc value, okungaba ukuthi abeke ngokweqile dc voltage ukuthi umonakalo izifunda umthwalo. Ngokuvamile, lukagesi imithwalo zingamelana kufike ku-20% overvoltage ngaphandle incurring yimuphi umonakalo ohlala njalo. Uma leli thuba, ukhethe ukunikezela enciphisa ingozi le. Izimpahla eziningi zihlanganisa ukuvikelwa overvoltage ejika supply off uma lo voltage okukhiphayo idlula imali ebekiwe. Enye indlela umuntu crowbar zener diode ukuthi uqhuba zamanje ngokwanele embundwini overvoltage ukuze isebenze ngamandla-supply zamanje nokukhawulela futhi amvalele phansi.
: Soft Qala kungase kudingeke Inrush komkhawulo zamanje uma amandla asebenza okokuqala noma uma amabhodi ezintsha kushisa ixhunyiwe. Ngokuvamile, lokhu ibangelwa wesifunda soft-isiqalo ukuthi siyehla kuyanda kokuqala zamanje bese uvumela operation evamile. Uma iyekwa ingelashwa, lamanje inrush zingakwazi ukukhiqiza isiqongo esiphakeme ukushaja wamanje okunomthelela lo voltage okukhiphayo. Uma lokhu kubalulekile kakhulu, khetha supply nalesi sici.
Undervoltage inani elisele ku: Akwaziwa njengoba UVLO, kuvela supply ku uma sifinyelela voltage ngokwanele okusezingeni eliphezulu input bese sivala supply uma voltage okokufaka lize liba ngaphansi kwe inani elithile. Lesi sici isetshenziselwa izimpahla ezisebenza ngamandla Umbuso kanye amandla webhethri. Lapho eziqhutshwa amandla webhethri ezisekelwe UVLO ikhubaza kwamandla (kanye ohlelweni) uma esithweni ibhethri kangangokuba lehla voltage okokufaka ukunikezela sika iphansi kakhulu avumele ukusebenza okuthembekile.
IElectromagnetic Oluvumelana (EMC): Okuhilelekile amasu design ukuthi ukunciphisa ukuphazamiseka kagesi (EMI). Ngo inkinobho-mode amandla kagesi, izinto zinamandla dc is ukuguqulelwa oqoshiwe noma umumo gagasi pulsed. Lokhu kubangela kwamandla ukukhiqiza umsindo ewumngcingo-band (EMI) empambanweni eyisisekelo imvamisa usuke futhi Harmonics ahlotshaniswa. Ukuze aqukethe lo msindo, abakhiqizi kumele ukunciphisa kwekhabhoni Babechichima noma kwenziwe.
abakhiqizi Amandla-supply ukunciphisa EMI emisebeni ngu befaka supply lensimbi noma fafaza lokunameka icala nge impahla metallic. Abakhiqizi futhi kudingeka sinake kusakhiwo sangaphakathi ukunikezela wiring ukuthi uya ngaphandle nangaphakathi supply, okuyinto zingakwazi ukukhiqiza umsindo.
Iningi ukuphazamiseka olwenziwa emgqeni amandla kuwumphumela main usuke noma ama okukhipha rectifiers. Ngamandla-factor ukulungiswa futhi efanele transformer design, ukuxhumana echibini ukushisa, kanye lemifanekiso design, umenzi amandla supply kunganciphisa olwenziwa ukuphazamiseka ukuze supply ingafinyelela EMI kwezimvume ejensi zokulawula ngaphandle incurring ngokweqile isihlungi izindleko. Njalo hlola ukubona ukuthi umkhiqizi amandla supply ihlangabezana nemfuneko zokulawula amazinga EMI.
isikhathi Iposi: Apr-23-2018
Unit 406, Jinhui Isakhiwo, Chenjiang Ephakathi Street, Zhongkai Hi-tech Zone, Huizhou Idolobha, Isifundazwe Guangdong, China.
Ifoni: + 86-0752-3220212